Myanmar Celebrity News – Celebrity News
Home > Posts tagged "Myanmar Celebrity News"
Tag: Myanmar Celebrity News
- August 14, 2018 0109
သြဂုတ်လ (၁၄) ရက်နေ့ အတွက် Myanmar Celebrity အနုပညာ နေ့စဉ်သတင်း...... 1. (၁၃) ကြိမ်မြောက် ထပ်မံ ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ အစ္စဏီ ရဲ့ အမှု 2. ယုံကြည်မှုရှိလို့ Bra မပါဘဲ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ ဟန်လေး 3. ပြိုင်ပွဲဝင်တွေ အပေါ် တစ်ပြေးတည်း စိတ်ထားတာပါ ဆိုတဲ့ Myanmar Idol စီစဉ်သူ 4. မြေးတွေနဲ့ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဖွားဖွား ဒေါ်ခင်လေးဆွေ ရဲ့ (၈၆) နှစ် ပြည့်မွေးနေ့ပွဲ 5. လွင်မိုး၊ နေတိုး၊ သက်မွန်မြင့် တို့ သရုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ “တာတူး” ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်း နှင့် အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ အနုပညာသတင်းများ စုစည်း တင်ဆက်မှု။
- August 11, 2018 0152
သြဂုတ်လ (၁၁) ရက်နေ့ အတွက် Myanmar Celebrity အနုပညာ နေ့စဉ်သတင်း...... 1. မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ နှင့်အတူ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အဆိုတော် ရွှေထိုက် 2. ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ဆီမီး (၁၁,၀၀၀) ကပ်လှူပူဇော်ခဲ့တဲ့ ၀တ်မှုန်ရွှေရည် 3. မွေးနေ့အကြို Suprise လုပ်ခံခဲ့ရတဲ့ သရုပ်ဆောင် ရွှေပိုးအိမ် 4. "We Love Fans" တွေနဲ့ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ချစ်သုဝေ ရဲ့ မွေးနေ့ပွဲ 5. ရေဘေးသင့်် ပြည်သူတွေကို သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်များ နှင့် အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ အနုပညာသတင်းများ စုစည်း တင်ဆက်မှု။ Myanmar Celebrity Daily News #WuttHmoneShweYi #ShwePoeEain #LuuMin
- July 27, 2018 0494
ဇူလိုင်လ (၂၇) ရက်နေ့ အတွက် Myanmar Celebrity အနုပညာ နေ့စဉ်သတင်း... 1. အိမ်ထောင်ပြုရမှာကို ကြောက်တယ်၊ ဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး 2. ၀ါဆိုမိုးဦး ရဲ့ အသက်(၂၄) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ 3. ဒိန်းဒေါင်ကို ပရိသတ်ရဲ့ မေတ္တာ ပြန်ရစေချင်တယ်ဆိုတဲ့ ခင်လှိုင် 4. ခင်လှိုင် ကို အကယ်ဒမီ ရစေချင်ခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ် ဂွမ်းပုံ 5. စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ပြသသွားမယ့် "Dimensions" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား နှင့် အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ အနုပညာသတင်းများ စုစည်း တင်ဆက်မှု။ Myanmar Celebrity Daily News: #PhwayPhway #KhinHlaing #ALinnYaung #YadanarBo #Mary #WaSoMoeOo #MyanmarCelebrityNews
- July 18, 2018 0867
- July 15, 2018 0350
Myanmar Celebrity အနုပညာနေ့စဉ် သတင်း – ဇူလိုင်လ ( ၃ ) ရက်
- July 6, 2018 064
ဇူလိုင်လ ( ၃ ) ရက်နေ့ အတွက် Myanmar Celebrity အနုပညာ နေ့စဉ်သတင်း.... 1. (၈) ကြိမ်မြောက် ထပ်မံရုံးထုတ် စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ အဆိုတော် အစ္စဏီ အမှု 2. အသက် (၃၅) နှစ်မှာ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားထားတဲ့ အေးမြတ်သူ 3. လွန်ခဲ့တဲ့ (၄) နှစ်လောက် က နှာခေါင်းခွဲစိတ်ပြုပြင်ထား တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု 4. “အသည်းကွဲသီချင်းတွေ မဆိုတော့ဘူး” ဆိုတဲ့ အေသင်ချိုဆွေ 5. “မျက်နှာဖုံးချစ်သူ” ဗီဒီယို ဇာတ်ကားရိုက်ကွင်းမှ ပိုင်တံခွန် နှင့် အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ အနုပညာသတင်းများ စုစည်း တင်ဆက်မှု။ Myanmar Celebrity Daily News: #AyeMyatThu #PaingPhyoeThu #Issani
Myanmar Celebrity အနုပညာနေ့စဉ် သတင်း – ဇွန်လ (၂၇) ရက်
- June 27, 2018 0146
ဇွန်လ (၂၇) ရက်နေ့ အတွက် Myanmar Celebrity အနုပညာ နေ့စဉ်သတင်း.... 1. ကိုယ်တိုင်စန္ဒယားတီး ပြီးသီချင်းဆိုခဲ့တဲ့ မိုရီဆာကီဝင်း 2. လိင်တူချင်း အိမ်ထောင်ကျ ခဲ့ဖူးတယ် ဆိုတဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင် 3. "ဈေးသည်မလေ ခပ်ချေချေ" ရိုက်ကွင်းမှ အောင်ရဲလင်း၊ရွှေမှုန်ရတီ နဲ့ ငွေမှုန်ရတီ 4. စေ့စပ်သွားတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု ကို အားကျနေတဲ့ ရွှေသမီး 5. တူရကီနိုင်ငံရောက် အေးမြတ်သူ ရဲ့ ခရီးသွားအလှပုံရိပ် နှင့် အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ အနုပညာသတင်းများ စုစည်း တင်ဆက်မှု။ Myanmar Celebrity Daily News: #NayToe #AungYeLinn #ShweThamee #MorisakiWin #AyeMyatThu #YinLet #AungMyintMyat #MyanmarCelebrityNews
- June 24, 2018 0368
- June 21, 2018 0388
ဇွန်လ (၂၁) ရက်နေ့ အတွက် Myanmar Celebrity အနုပညာ နေ့စဉ်သတင်း.... 1. သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသု နှင့် ဒါရိုက်တာ ဏကြီး တို့ရဲ့ စေ့စပ်မင်္ဂလာ ဧည့်ခံပွဲ 2. "ဥပါဒါန်" ရုပ်ရှင် ပဠာန်းဆက်များအားလုံးအတွက် ကောင်းမှု ကုသိုလ် အလှူ 3. ပရိသတ် ချစ်မယ့် ပုံစံ နဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျမယ် ဆိုတဲ့ နေတိုး ရဲ့ အချစ်ရေး 4. အလှမယ် ထက်ထက်ထွန်း ရဲ့ အသက် (၂၆) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အလှူ 5. ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်ကို အလည်ရောက်နေတဲ့ မေမြင့်မိုရ် နှင့် အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ အနုပညာသတင်းများ စုစည်း တင်ဆက်မှု။ Myanmar Celebrity
- June 6, 2018 1132